News | relation
News | Tag: relation
रेखालाई अंगालो हाल्न किन गइन् दीपाश्री ?
काठमाडौं, पुस १६ । एउटा फिल्म ‘छक्कापन्जा–२’ को विषयलाई लिएर सुरु भएको दुई अभिनेत्रीको शितयुद्ध अहिले अनौठो सम्बन्धमा रुपान्तरण भएको छ ।
यी हुन् हरेक आमाले आफ्नो छोरीलाई सिकाउनै पर्ने ५ कुरा
काठमाडाैं । परिवारमा आमाको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेको बच्चाबच्चीहरुलाई एउटा राम्रो संस्कार दिनु हो ।
कुनै युवतीलाई प्रेमप्रस्ताव राख्नु अघि अपनाउनुहोस यी ५ उपाय
आजकाल केटा केटीहरु सँगसँगै अध्ययन गर्छन् वा काम गर्छन् र धेरै समय एक अर्कासँगै बिताँउछन् । यस्तोमा कुनै पनि युवक कुनै युवती प्रति आकर्षित हुन्छ भने त्यस कुरालाई सामान्य नै मान्नुपर्छ ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत उपाध्यायले किन भेटे योगीलाई ? कुटनीतिक क्षमतामाथि नै आशंका
काठमाडौं, असार ९ । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायको कुटनीतिक क्षमताको विषयमा बेला बेला टिप्पणी हुने गर्छ । दुई बर्षअघि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा उनै उपाध्याय राजदूत थिए ।
पारस शाहसँग अभिनेत्री सुष्मा कार्कीको के हो खास सम्बन्ध ?
काठमाडौं, वैशाख २० । अभिनेत्री सुष्मा कार्की पछिल्लो समय सिनेमामा क्षेत्रमा निस्क्रिय छिन् । उनी आफू ‘नयाँ फिल्ममा काम गरिरहेको’ दावी गरे पनि कुन फिल्ममा कस्तो भुमिका भन्ने बारे ‘अहिले केही भन्न नचाहेको’ बताउँछिन् ।
कस्तो छ सौतेनी आमा र बलिउड स्टारको सम्बन्ध ?
बलिउडमा केही यस्ता सम्बन्धहरु छन् जसले तपाईलाई आश्चर्यमा पार्न सक्छ । सौतनी आमासँगको सम्बन्धलाई लिएर बेलाबेलमा बलिउडमा चर्चा हुनेगर्छ ।
नेपालमा राजनीतिक घेराबन्दी गर्न खोज्नु भारतको अक्षम्य अपराध
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा विद्यावारिधी (पिएचडी) गरेका प्रोफेसर डाक्टर सुशील पाण्डे नेपाल –अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि उत्तिकै चासो राख्छन् । त्रिभूवन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा १६ वर्षभन्दा बढी प्रोफेसर भएर काम गर्दै आइरहेका प्रोफेसर पाण्डेले अमेरिकाको एउवर्न विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा ३६ वर्ष लामो अनुभव संगालेका पाण्डेले हाल इन्सिटच्युट अफ एडभान्स कम्युनिकेसन एजुकेशन एण्ड रिसर्चमा अध्यापन गराउँदै आइरहेका छन् ।